कमला, अब्खाजिया को गाउँमा
म Kaman जस्तै ठाउँ बारेमा को जो कोहीले सुने? अब्खाजिया त्यहाँ Sukhum शहर देखि 15 मी स्थित एक गाउँ हो जो बीच धेरै रोचक सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा, छ।
Kamau गर्न बाटो सानो स्थानीय गाउँमा मार्फत जान्छ र Shroma Yashtuha धेरै राम्रो 1992-1993 को भीषण लड समयमा नाश। यहाँ पर्यटकहरु पश्चिमी र पूर्वी Gumista को गहिरो घाटीहरू को एक सुंदर दृश्य। र तिनीहरूलाई बीच गर्व Gumbihu पहाड, माथि जो एउटा सानो मध्ययुगीन चर्च छ खडा। Yashtuhe मा पुरानो चर्च र चिहान गम्भीर Abbot Glinsky मरुभूमि पिता Seraphim भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
Kama - पहिले यसको धेरै शताब्दीयौंदेखि फिर्ता जान्छ कि एक समृद्ध इतिहास छ प्राचीन ठाँउ हो।
एक पटक एक समय मा, ग्रामीण बस्ती भनिन्थ्यो - Guma। हालसम्म 1884 मा म यहाँ Vrisis पुरातत्वविद् ग्रीस देखि आउनुभएको थिएन। Koman पुरातन शहर रूपमा स्थान अन्य छैन, र यो स्थान स्क्रल मा उल्लेख गरिएको छ बारे छ: एक, जबकि लागि यहाँ काम गरेपछि मन्दिरको भग्नावशेष अन्वेषण, उहाँले एउटा अविश्वसनीय खोज गरे! यस पृथ्वीमा प्रसिद्ध प्रचारक Ioann Zlatoust र पवित्र शहीद Basiliscus पनि गाडे छ जो लिङ्क गर्न बाटो मा मृत्यु मा थियो। त्यतिबेलादेखि गाउँमा कमला Guma रूपमा चिनिन थाले। अब्खाजिया पौराणिक र केही परम्परा विकसित गरेको ठाउँमा धेरै छ, तर यो ग्रामीण बन्दोबस्त पृष्ठभूमिमा विरुद्ध बाहिर खडा।
पौराणिक कथा अनुसार, जहाँ शहीद beheaded थियो Basilisk ठाउँ मा चमत्कारपूर्ण ढङ्गमा स्रोत देखियो। यो पानी विभिन्न रोगहरु र पनि निको घाउ निको। तर, सेन्ट Basilisk स्रोत को निको पानी आज आउन पिउन। एक काठ मण्डप मसीही शहीद को सम्मान मा बनाइएको थियो पनि छ, त्यहाँ सेन्ट को अवशेषहरूको छन्।
Dostorimechatelnosti बन्दोबस्त कमला
गाउँमा एक चर्च छ Ioanna Zlatousta। आज, उहाँले Ioann Zlatoust गाडे ठाउँमा, यो तिर्थयात्रा केन्द्रबिन्दु भयो, र आफ्नो चिहान चर्च अहिले छ। यो XI शताब्दीको चर्च को भग्नावशेष मा बनाइएको थियो, र रोचक तथ्य नयाँ चर्च कार्यकर्ता को घण्टी टावर को निर्माण को प्रक्रिया मा झुक्किएर प्रचारक को शरीर संग sarcophagus पत्ता कि भन्न सकिन्छ।
चाँडै सेन्ट गरेको रहलपहल सबै सम्मान संग Constantinople हस्तान्तरण गरेका थिए।
अनावश्यक, भन्न धेरै कमला को गाउँमा को अर्थोडक्स मसीहीहरूले venerated? अब्खाजिया पर्यटकहरुका लागि एक आकर्षक ठाउँ हो, र यो बन्दोबस्त एक अपवाद छैन। जल द्वारा सेन्ट स्रोत Basiliskos आउन मात्र होइन पानी पनि स्नान यसलाई मा टाउको संग पिउन, तर। पुरातन लिजेन्ड, चिकित्सा मा bathed रूपमा, पानी रोगहरु हटाउनेछ प्राप्त गर्न सक्छन्, स्वास्थ्य सुधार, र जीवन को अर्थ पाउन।
सुन्दर प्रकृति, intoxicating हावा र रोचक ठाउँहरू धेरै - सबै नै अब्खाजिया संकलित। Kaman (फोटो बस्तियों यस लेखमा देख्न सकिन्छ) यसको प्राचीन साइटहरु र आश्चर्यजनक दृश्यहरु लागि प्रभावशाली छ। र यो गाउँ भ्रमण गर्न निर्णय गरेका ती सबै यो सौन्दर्य आफैले हेर्न सक्नेछन्।
तिर्थयात्रा एक केन्द्रको रूपमा Kaman
तैपनि, पहिलो स्थानमा, यो गाउँ तिर्थयात्रा एक ठाउँ छ। विश्वासीहरूको दर्जनौं को shrines स्पर्श गर्न यहाँ आउँछन्। खाली यहाँ हुँदैन। तपाईं सधैं कम्तिमा एक वा दुई पाल erected देख्न सक्छौं।
त्यहाँ मन्दिर Ioanna Zlatousta तिर्थयात्रा अर्को केन्द्र, मसीही दुनिया भर revered छ जो नजिक छन्। यो स्थान को टाउको को तेस्रो अधिग्रहण छ Ioanna Krestitelya। धेरै शताब्दीयौंदेखि अघि relic गोप्य बाइजान्टियम लिइएका र Kaman देखि केही किलोमिटर लुकाउनु भएको थियो।
केही समय पछि त्यो फेला परेन र Constantinople फर्के थियो। मिति Kamansky Grotto सबै मसीहीहरूको लागि एक पवित्र स्थान मानिन्छ।
सबै माथि बाहेक, त्यहाँ धेरै निको Springs, कमला को गाउँमा अवस्थित छन् जो छन्। अब्खाजिया यसको खनिज पानीका मुहानहरू मा धनी छ, र गाउँमा एउटा अपवाद हुने छैन। तपाईं सिर्फ पनि राम्रो मात्र होइन शरीर तर पनि प्राण, उनको स्वास्थ्य सुधार गर्न साथै यो अद्वितीय ठाउँमा प्रकृति मा आराम गर्न हिंड्न र विभिन्न आकर्षण र shrines भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, तर!
Yenisei खाडी: खोज, वर्णन को इतिहास, र पोखरी को बासिन्दाहरू
यो उल्लेखनीय भूमिगत स्टेशन "Orekhovo"?
क्रेते: सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट र रिसोर्ट्स
कसरी "Photoshop" मा एउटा फोटो क्रप गर्न: शुरुआती लागि निर्देशन
शब्द "ढोका" गर्न उपयुक्त राइम
एक नक्कली थिए 15 चिरपरिचित फोटो
बगैचाको रानी हनीस्केल हो। किस्महरु, रोपण को प्रविधि र हेरविचार को तरिका।
Aleksandr हाँसो। जीवनी र प्रसिद्ध लेखक को काम
Nizhny Tagil होटल: नाम, ठेगाना, समीक्षा
खबरोभ्स्क क्षेत्र, शहर र सहर: भौगोलिक स्थान, जनसंख्या
को Bluestacks अंग्रेजी भाषा कसरी परिवर्तन गर्न: विस्तृत निर्देशनहरू